6 matsotsi emanoja anouya kuzokukochekera | Bezzia
Maria vazquez | 10/06/2021 12:00 | Nhau
Iwe unofarira kuverenga nyaya dzematsotsi here? Kana iri genre iri iro rinonyanya kukuvaraidza, cherekedza mazita atinogovana newe nhasi. Aya matanhatu emanoja ematsotsi achangobaya muzvitoro zvemabhuku kana ari kuuya nekukurumidza, bvunza nezvawo! Inowanikwa munzvimbo dzakasiyana dzakasiyana, vanovimbisa kusagadzikana, kusagadzikana, kusagadzikana ...
1 Hupenyu Hwakavanzika hwe Úrsula Bas
2 Pakati pehusiku
3 Mhuri yakajairika
5 Kuponda kwakakwana kusere
6 Kune mumwe nemumwe zvake
Hupenyu Hwakavanzika hwe Úrsula Bas
Munyori: Arantza Portabales
Úrsula Bas, munyori akabudirira, anotungamira hupenyu hunoratidzika kunge hwakaipa muSantiago de Compostela. Mumwe musi weChishanu munaFebruary anosiya imba yake kunopa hurukuro muraibhurari uye haadzokere. Murume wake, Lois Castro, anoshora kunyangarika kwake mushure memaawa makumi maviri nemana. Ularsula, uyo anoramba akavharirwa mune yepasiIye anonyatsoziva mukororo wake mushe - anoyemura ane manetiweki aakabvumidza iye kuti aputirwe pasina kuisa kushora - uye anoziva kuti munguva pfupi inotevera achazomuuraya.
Inspector Santi Abad, vakabatanidzwazve kumapurisa mushure megore nehafu zororo repfungwa, uye mumwe wake Ana Barroso, uyo achangogadzwa kuve mutevedzeri weaongorori, vakatanga kutsvaga kusingachinjiki nerubatsiro rwekomishinari mutsva, Velex Veiga. Nhanho dzako dzese dzinokutungamira imwe nyaya isina kugadziriswa: iyo yaCatalina Fiz, yakanyangarika muPontevedra makore matatu apfuura, uye yakanangana nemhondi inoita kunge iri kutora mutemo mumaoko ayo.
munyori: Mikel Santiago
Editorial: Zvinyorwa B
Husiku humwe hunogona kucherechedza ramangwana revose vakarirarama? Makore anodarika makumi maviri apfuura mushure mekudonha kwedombo nyeredzi Diego Letamendia akapedzisira kutamba mutaundi rekwake reIlumbe. Ndihwo hwaive husiku hwekuguma kwebhendi rake uye neboka rake reshamwari, uyezve neiyo ye kunyangarika kwaLorea, musikana wake. Mapurisa haana kubvira akwanisa kujekesa zvakaitika kumusikana, uyo akaonekwa achimhanya achibuda muhoro yemakonzati, sekunge ari kutiza chimwe chinhu kana mumwe munhu. Mushure meizvozvo, Diego akatanga rakabudirira solo basa uye haana kuzombodzokera kutaundi.
Kana imwe yenhengo dzechikwata ichifira mumoto usingazivikanwe, Diego afunga kudzokera kuIlumbe. Makore mazhinji apfuura uye kuunganazve neshamwari dzekare kwakaoma: hapana mumwe wavo achiri munhu wavaive. Kunyange, fungidziro inokura yekuti moto hauna kuita netsaona. Zvinokwanisika here kuti zvese zvine hukama uye kuti, kwenguva refu gare gare, Diego anogona kuwana matsva matsva nezve zvakaitika naJorea?
munyori: Mattias Edvardsson
Adam naUlrika, murume nemukadzi vanogara, vanogara nemwanasikana wavo ane makore gumi nemasere Stella munzvimbo inofadza kumucheto kweLund. Mukuonekwa, hupenyu hwake hwakakwana ... kusvikira rimwe zuva kunyengera uku kwakatemwa pamidzi yawo apo Stella anosungwa nemhosva yekuponda murume angangoita makore gumi nemashanu mukuru kwaari. Baba vake, mufundisi anoremekedzwa weSweden, uye amai vake, gweta rinozivikanwa rekudzivirira matsotsi, vanofanira kufungisisa nezvehunhu hwavo sezvavanomudzivirira uye vachiedza kunzwisisa kuti sei ari iye anofungidzirwa mhosva. Vachaenda zvakadii kudzivirira mwanasikana wavo? Iwe unonyatsoziva kuti zvakaita sei? Uye zvakatonyanya kunetsekana: vanozivana here?
munyori: Joachim B. Schmidt
Kalmann Óðinnsson ndiye mugari wepakutanga weRaufarhöfn, musha mudiki wekuredza uri munzvimbo dzisina kugadzikana dzeIceland. Ane makore makumi matatu nemana ekuberekwa, autistic, uye kunyangwe achionekwa nevavakidzani vake sebenzi reguta, iye-akazvisarudzira sheriff wenzanga. Zvese zviri pasi pekutonga. Kalmann anopedza mazuva ake achitenderera mapani akakomberedza guta remaodzanyemba-gwenga, achivhima makava epolar nepfuti yake isingaparadzanisike yeMauser, nekuredza hove dzeGreenland muArctic Ocean inotonhora. Asi, dzimwe nguva, protagonist yedu inoita kuti tambo dziyambuke uye anova njodzi kwaari uye, pamwe, kune vamwe ...
Rimwe zuva, Kalmann anowana dziva reropa muchando, zvinowirirana ne kunyangarika kunyangarika kwaRobert McKenzie, murume akapfuma kwazvo muRaufarhöfn. Kalmann ave kuda kukundwa nemamiriro ezvinhu, asi nekuda kwehungwaru hwake, kuchena kwemoyo uye kushinga kwake, acharatidza kuti, sekuudzwa kwaasekuru vake, IQ haisi zvese muhupenyu huno. Zvese zviri pasi pesimba…
Kuponda kwakakwana kusere
munyori: Peter swanson
Makumi gumi nemashanu apfuura, asingazivikanwe newani fan Malcolm Kershaw akaburitsa pane blog rechitoro chemabhuku kwaakashanda panguva iyoyo rondedzero - iyo yaisatombowana chero kushanyirwa kana makomendi - ayo mumaonero ake vaive ivo mhosva zhinji dzakanyorwa dzakaitika munhoroondo. Akaidaidza kuti Eight Mhondi Dzakakwana uye akaisanganisira zvekare nemazita akati wandei emhando dema: Agatha Christie, James M. Cain, Patricia Highsmith ...
Ndokusaka Kershaw, ikozvino murikadzi uye muridzi wemubhuku rezvitoro diki rakazvimiririra muBoston, anotanga kubatwa apo mumiriri weFBI anogogodza pasuo rake pazuva rinotonhorera raFebruary, achitsvaga ruzivo pane akateedzana akaomarara emhirizhonga akafanana .avo vakasarudzwa naye pane iro rekare runyorwa ...
Kune mumwe nemumwe zvake
munyori: Leonardo Sciascia
Anofinha Nyamavhuvhu masikati wemishonga weguta diki reSicilian anogamuchira asingazivikanwe mavanomutyisidzira nerufu uye iyo, zvisinei, iye haakoshesi. Asi, mazuva akati gare gare, wemishonga anopondwa mumakomo pamwe nemumwe anoremekedzwa wemuno, chiremba Roscio. Nepo runyerekupe rwakaburitswa ruchikonzera kukuvara kusingagadzirisike, uye mapurisa ne carabinieri vakarova mapofu, Laurana chete, bland asi ane tsika mudzidzisi wepachikoro chepamusoro, anotevera hutungamiriri hunogona kutungamira kumhondi. Akaona kuti asingazivikanwe akagadzirwa nemazwi akachekwa mupepanhau reKaturike rinochengetedza, L'Osservatore Romano, sezvo logo yayo, Unicuique suum - "Kune mumwe nemumwe, zvake" - inoonekwa kuseri kwezvikwapuro. Uye anozvikanda muhupenyu hwevavakidzani vake.
Ndeapi eaya matsotsi emanoja anobata iwe kutarisa zvakanyanya? Wakamboverenga here imwe yeaya matsotsi vanyori vanyori pamberi? Goverana nesu mamwe emabhuku ematsotsi awakange uchinakidzwa nawo nguva pfupi yadarika.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Bezzia » Nhau » 6 matsotsi emanoja anouya kuzokukochekera